Imibuzo evame ukubuzwa - Xiamen Kinghow Outdoor Product Co., Ltd.
Yiziphi izinhlobo zomkhiqizo owenziwa yiKingHow?
Sinohlu oluphelele lwemikhiqizo esiyikhiqizayo, kepha ikakhulukazi esikhwameni. Ubhaka, isikhwama se-Duffel, isikhwama sejimu yezemidlalo, isikhwama sezinsiza, isikhwama esipholile njll.
Ngabe hlobo luni lwendwangu noluphawuliwe iKingHow isebenza ngalo?
I-Polyester, Inayiloni, I-Canvas, i-Oxford, i-Ripstop inayiloni lokumelana namanzi, isikhumba se-PU yizindwangu zethu ezivame kakhulu. Kubhalwe uphawu lokuphrinta nokufekethisa kuyatholakala. IKingHow inesipiliyoni esikhulu sokuthola cishe noma iyiphi into edingekayo ukuthunga umkhiqizo wakho. Uma unezidingo ezithile zezinto ezibonakalayo esingazitholela zona.
Yini isikhathi esivamile sokuhola sesampula noma i-oda?
Imvamisa, ukusampula kuzodinga izinsuku eziyi-7-10. Isikhathi esivamile sokuhola sento eyenziwe ngokwezifiso amasonto ama-4-6 kuya ngezidingo zokuthunga, ubuningi, nokutholakala kwezinto zokusetshenziswa. Ezimweni zama-oda wokujaha, sizosebenza nawe ngakho konke okusemandleni ukuhlangabezana nezidingo zakho zedethi yomkhumbi.
Ngabe iKingHow idizayina noma ithuthukisa umkhiqizo wamakhasimende?
Empeleni, asiqambi futhi sithuthukise umkhiqizo omusha wamakhasimende. Kepha sizosiza amaklayenti ethu ukuthi enze lo msebenzi, ngolwazi lwethu singanikeza isiphakamiso ngomkhiqizo futhi sisize ekutholeni izixazululo zokuthola isinqumo esihle.
Ngabe iKingHow ihlinzeka ngamasampuli?
Isampula lamahhala ngokujwayelekile, kepha uma wenza into eyinkimbinkimbi noma udinga isikhunta esivulekile, kufanele abe nenkokhelo yokukhokhela izindleko zokuthuthukiswa kwephethini, ukusethwa kwesikhunta nokuthengwa kwezinto. Lapho kufakwa i-oda, kuzokhishwa imali yesampula kunani le-oda, futhi isampula yangaphambi kokukhiqiza ihlala inikezwa ukusayinelwa ngaphambi kokuqala kokukhiqizwa.
Ingabe kukhona ubuncane boku-oda?
Okwenzelwe uku-oda noma into ephrintiwe yangokwezifiso, ubuncane be-oda elincane izingcezu eziyi-100 noma ama- $ 500. Sizama ukufaka amakhasimende lapho kungenzeka khona. Kodwa-ke, uma ukukhiqizwa kwethu kungasethwanga ukufaka umkhiqizo wakho kahle, singadinga inani elikhudlwana ukumboza izindleko zokusetha.
Ngabe iKingHow ikuhlinzeka kanjani konke okusetshenzisiwe okudingekayo ukwenza into?
IKingHow iguquguquka kakhulu ngokuthengwa kwezinto zokusetshenziswa zomkhiqizo wakho. Ngokusebenzisa inethiwekhi yethu yabahlinzeki, singathola noma iyiphi into ngamanani entengo asebenzayo. Ngakolunye uhlangothi, uma ikhasimende lithanda ukusinikeza izinto zokwakha, siyajabula ukuzamukela. Okwe-hardware eyingqayizivele noma ezinye izinto ezilukhuni ukuthola, sizosebenzisana nawe ukunquma isu elihamba phambili lokuthenga.
Yiliphi igama lokukhokha elidinga i-KingHow?
IKingHow icela izinkomba zezikweletu ezivela kuwo wonke amakhasimende amasha futhi yenza isheke ngaphambi kokuqalwa komsebenzi ku-oda labo lokuqala. Sivame ukucela ukukhokhwa phansi kwe-30-50% ku-oda lakho lokuqala. Ngaphambi kokuthunyelwa kwe-oda, iKingHow izothumela i-invoyisi yebhalansi. Ngokuphinda uhlele kabusha, singenza idiphozi engu-30% no-70% esele ngekhophi ye-B / L.